राजधानी आउनेहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे यस्तो अपिल! – PathivaraOnline
Home > समाचार > राजधानी आउनेहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे यस्तो अपिल!
admin October 4, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकामा दिनहुँ संक्रमितको संख्या थपिदै गएको छ । मुलुकभर थपिने संक्रमितको संख्याको आधा भाग काठमाडौमा मात्र हुने गरेको छ । शनिवार आएको कोरोना रिपोर्टमा राजनीतिक दलका नेता, विशिष्ट ब्यक्ति र वालुवाटरको सुरक्षामा खटिएका ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोना भाइरस तीव्र भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं नआउन अपिल गरेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा अहिले संक्रमितको दर बढिरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले भने, ‘सकभर काठमाडौं नआउनुहुन र आउनै पर्ने अवस्था भए जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै आउन अनुरोध गर्दछौं।’
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार मुलुकभर शनिबार २ हजार १ सय २० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौंका मात्रै झन्डै आधा अर्थात् १ हजार १ जना छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित मोरङ, सिरहा, चितवन, रूपन्देही, सुर्खेत, कैलालीलगायत जिल्लामा सक्रिय संक्रमित बढी छन्।
कहिले खुल्छ नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर?
पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ वागेश्वरी मन्दीर मुलुकभित्र मात्रै होइन, मुलुक बाहिरका भक्तजनका लागि पनि उत्तिकै महत्व र आस्थाको केन्द्र हो । जहाँ हरेक व्यक्तिले गरेको भा क ल (मन्नत) पुरा हुने विश्वासमा वर्षेनी दशौं हजार भक्तजन शीर झुकाउन आउँछन् ।
विभिन्न चाडपर्वमात्रै होइन हरेक दिन, हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुको भिडले बागेश्वरी प्रतिको आकर्षणलाई दर्शाउँछ । बडादशैं बागेश्वरीको मूल पर्वमध्ये पर्छ, जहाँ नेपालीमात्रै होइन, भारतका टाढा टाढाका भक्तजनपनि बागेश्वरी आइपुग्छन् ।
तर, कोरोना कहरसँगै गत चैत्र ११ गतेदेखि लाग गरिएको लकडाउनले यो आस्थाको केन्द्र सुनसान बनाएको छ । लकडाउन अन्त भएर जोखिमबीच जनजीवन चलायमान भइरहँदा पनि दुःख बिसाएर आत्मविश्वास आर्जन गर्ने यो पवित्र थलो चारैतिरबाट घेरिएको बन्धनभित्र पारिएको छ ।
फेरि चितवनमा रोडमै यसरी पैसा छरेर भागेपछि… के हाेला कारण?